ရေးသားသူ poemflower at Tuesday, September 29, 2009
yangonthar September 29, 2009 at 7:08 PM
ကော်ဖီအကြောင်း တစေ့တစောင်း လာရောက်ဖတ်မှတ်သွား ပါတယ် ကျနော်နဲ့ အရင်းနှီးဆုံးကတော့ သူပါပဲ သူမရှိရင် တစ်ခုခု လိုနေသလို .... အာရုံပဲ မရသလိုလို ..ဟဟ .... သူရှိရင် အပျင်း ပြေသလို ခံတွင်းလည်း ရှင်းပါတယ် ... တစ်နေ့ ကို သုံးခွက်တော့ အနည်းဆုံးသောက်ဖြစ်နေတယ် .....
အရင် နှစ်ခွက် ခု သုံးခွက် သောက်ရတော့မယ်။
ကော်ဖီတန်ခိုးနဲ့ ကျန်းမာရေးတွေ တိုးစေမည်။
လင်းကြယ်ဖြူ September 30, 2009 at 2:26 AM
ကော်ဖီတအားသောက်ရင် နှလုံးရောဂါ ဖြစ်တတ်တယ်ပြောကြလို့..
လျှော့နေရတာ..ခုတော့ ပုံမှန်စိတ်ကြိုက် ပြန်သောက်ရတော့မယ်..
kokomaung.uk September 30, 2009 at 3:43 AM
ကျနော်က တစ်ရက် အနည်းဆုံး နှစ်ခွက်သောက်နေကျ။
မောင်ကောင်း September 30, 2009 at 4:41 AM
ကော်ဖီသောက်တတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ကူးယူသွားပါတယ်.. ဘယ်အရာမဆို တန်ဆေး လွန်ဘေးဆိုတဲ့ စကားလေးနဲ့ ချင့်ချိန်လုပ်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ... အခုလိုကျန်းမာရေးအသိပေးလေး ဖော်ပြပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစ်မ... စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပါစေ...။
မမရေ ...... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရောင်က ကောဖီ တနေ့ကို ၃ ခွက်လောက်တော့ သောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေက မကောင်းဘူးလို့ ပြောပေမယ့် ကြိုက်တယ်လေ။ အခုလောက်ဆိုရင်တော့ ဘာမှ မဖြစ်မှန်းသိသွားပြီ။ ကျေးဇူးပါ မမ။
မိုးစက်အိမ် September 30, 2009 at 5:15 PM
ဗဟုသုတရတယ်အမရေ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးကတော.
ဒီလိုပါဘဲ ဒွန်တွဲနေမှာပါဘဲ ... တစ်ခုဘဲရှိတယ် ကော်ဖီသောက်တိုင်း
လွမ်းတယ်တော. မဖြစ်ဖို.အရေးကြီးတယ် ရတနာဦးသီချင်းလေ :P
Angel Shaper September 30, 2009 at 5:41 PM
မမတို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါ့။ ဟိဟိ
သမီးကို ကော်ဖီလျော့သောက်ပြောနေကြတာလေ။ ဟိဟိ
လင်းဦး(စိတ်ပညာ) October 2, 2009 at 2:59 AM
ကျွန်တော်ကတော့ တစ်နေ့ကို ကော်ဖီ (၁၀)ခွက်ကျော် သောက်တယ်.. ဒါအခု ဆရာဝန်က ပြောလို့ လျှော့ထားတာ... အရင်တုန်းက အဲ့ထက်များတယ်....
daydream October 3, 2009 at 9:27 PM
ဒီပို့စ်ရေးပေးတာ ကျေးဇူးပါ.... ကော်ဖီကြိုက်တဲ့သူတွေရဲရဲသောက်ရဲအောင်လို့လေ.. နေ့အိပ်မက်က သူများတွေ ဘာပြောပြော ကော်ဖီစွဲလာတာကြာပေါ့....